जियोमेटिक्स म्यागजिन - शीर्ष --० - years बर्ष पछि - जिओफुमाडास
जियोमेटिक्स म्यागजिन - शीर्ष --० - years बर्ष पछि
मार्च, 2019 जियोस्पाटियल - जीआईएस
2013 मा हामीले एक वर्गीकरण गर्नुभयो जियोमेटिक्सको क्षेत्रलाई समर्पित पत्रिकाहरू, सन्दर्भको रूपमा तिनीहरूको एलेक्सा रैंकिंग प्रयोग गर्दै। Years बर्ष पछि हामीले अपडेट गरेका छौं।
हामीले अघि नै भनेजस्तै भौगोलिक म्यागजिनहरू बिस्तारै एक विज्ञानको लयसँग विकसित भएको छ जसको परिभाषा टेक्नोलोजिकल अग्रिममा र भू-ईन्जिनियरि aroundको वरिपरिको विषयहरूको फ्यूजनमा निर्भर हुन्छ। हालको प्रचलनले लामो समयदेखि प्रिन्ट म्यागजिनहरू मारे, अन्य प्रकाशनहरूको प्राथमिकता विषयलाई पुन: बनाए र ब्लग सुविधाहरूसहितको डिजिटल प्रकाशनको साथ पारम्परिक पत्रिकाको बीचको खाडल बन्द भयो; सामाजिक नेटवर्कमा यसको प्रभाव थपेको छ। ज्ञान व्यवस्थापन र अभिनेताहरू बीचको तालमेलमा थपिएको मूल्य अधिक महत्त्वपूर्ण भयो जुन पारम्परिक प्रकाशकको ​​भूमिकाले अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूको समन्वय, वेबिनार सेवा र डिजिटल सामग्रीको प्रकाशनमा सार्यो।
एलेक्स रैंकिंग प्रयोग गरेर मापन
म मापको प्रयोग गर्दैछु alexaमार्च 31१, २०१ 2019 मिति। यो र्या ranking्कन गतिशील छ र समयसँगै वेबसाइटहरूको राम्रो वा नराम्रो अभ्यासहरू र गुगलको एल्गोरिदमहरूको समायोजनमा निर्भर गर्दछ। सामान्यतया, यो पाठकहरू वा आगन्तुकहरूको लागि बराबरको एक किसिमको साइटको स्वास्थ्य सम्बन्ध हो।
एलेक्सा रैंकिंग कम हो, यो उत्तम छ, यही कारणले फेसबुक.com र गुगल डॉट कॉम पहिलो दुई नम्बरहरूमा हुन्छ। शीर्ष १०,००,००० भन्दा तल हुन यो यत्ति सजिलो छैन र यद्यपि त्यहाँ देशले पनि यस अवस्थामा क्रमशः रहेको छ। मैले यसलाई ग्लोबलको प्रयोग गरेर गर्न मन परेको छु, स्पेनको लागि रैंकिंगलाई थप जानकारीको रूपमा र साइटले पनि उल्लेखनीय र ranking्कि has पाएको केही देशका रूपमा।
यो चाखलाग्दो छ, किनकि शीर्ष १० मा प्रतिस्पर्धा हुन खोज्नु भन्दा पर, यसले पूरकता देखाउँदछ जुन ज्ञान प्रसार साइटहरूले यस पारिस्थितिक प्रणालीमा प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यस समयमा त्यहाँ केवल दुई स्पेनिश भाषी साइटहरू थिए (जिओफुमाडास र फ्रान्जको ब्लग)। आज हामीसँग His हिस्पैनिक साइटहरू छन्, जुन म्यापिंगजीआईएसको बृद्धिसँगै टॉप ,०, जीआईएस र बियरबाट उठ्यो जुन त्यसबेलासम्म टेरिटेरियो जियोनोनोभा ब्लगमा देखा पर्दैनथ्यो।
यो 40 को नयाँ Top2019 स्थिति हो।
एक सन्दर्भको रूपमा, म देखाउँछु 2013 मा अघिल्लो स्थिति
जियोमैटिक पत्रिकाहरूको सूची कहाँबाट आयो?
मैले कम्तिमा public० प्रकाशनहरू प्रयोग गरेको छु, अघिल्लो सूची कायम गर्दै, कम्तिमा elim लाई हटाएर जुन पहिले नै चलनबाट बाहिर छ, 40,००,००० भन्दा कमको दर्जामा अर्डर गरिएको छ। जबकि यो साइटको लागि घातक स्थिति हो, मैले यो बढाएर केही म्यागजिनहरूको बृद्धि गर्न सक्दछु जुन राम्रो भाग्यको योग्य छ।
यी पत्रिकाहरूको 21 अंग्रेजीमा छन्।
१ हिस्पैनिक सन्दर्भबाट हुन्। जियोफुमाडस भेरियन्ट र gvSIG प्रोजेक्ट ब्लगको साथ, अन्य भाषाहरूको ट्राफिक छ यद्यपि तिनीहरू मूल रूपमा स्पेनिशमा उत्पादन भएका छन्।
Brazil ब्राजीलका मूल हुन्। यस मामलामा भेरिएन्टको साथ, त्यो मुन्डोजीयोसँग पनि यसको ट्राफिकमा स्पेनिश संस्करण छ।
ब्राजिलका हरियालीमा चिन्ह लगाइएको छ, स्पेनिशहरू नारंगीमा र एंग्लु-सक्सनका ब्लुले।
शीर्ष 10 सूची
होइन पत्रिका विश्व रैंकिंग Epaña Ranking अन्य रेटिङ
1 geospatialworld.net 94,486 - संयुक्त राज्य अमेरिका 94,448
2 gislounge.com 107,570 संयुक्त राज्य अमेरिका 55,355
3 geoawesomeness.com 113,936 संयुक्त राज्य अमेरिका 64,660
4 gpsworld.com 125,207 संयुक्त राज्य अमेरिका 126,865
5 geofumadas.com 130,586 25,307 मेक्सिको 19,983
6 mappinggis.com 162,860 10,143 मेक्सिको 9,182
8 andersonmedeiros.com 178,637 - ब्राजिल 14,002
10 घर 250,823 36,159 मेक्सिको 26,249
यस Top10 को केहि विशेषताहरु:
सामान्यतया, तिनीहरू शीर्ष 10 मा रहन्छन्: gislounge, gpsworld, geofumadas, र ArcGeek (फ्रान्सको ब्लग)।
यस शीर्ष १० मा नयाँ भाँडादारहरू: जियोस्पाटियाल वर्ल्ड, म्यापिg्गिस, जियोअउभियनेस, क्लिक जीईओ (एन्डरसन माडेइरोस ब्लग), जिओनोभाको ब्लग र जिइस एण्ड बियर्स।
Top10 directionsmag.com को 12 र 30 Gisuser गर्न 24, 11 र mundogeo.com giscafe.com गर्न मरेका को 19, mapsmaniac.com, mycoordinates.org बाहिर गए।
10 को 20 को सूची
11 gim-international.com 268,868 - संयुक्त राज्य अमेरिका 83,208
12 worldgeo.com 272,855 - ब्राजिल 466,694
13 directionsmag.com 316,516 - संयुक्त राज्य अमेरिका 162,383
14 खोजी गर्नुहोस् 323,707 - ब्राजिल 24,352
15 pobonline.com 347,202 संयुक्त राज्य अमेरिका 207,854
17 lidarnews.com 524,281 संयुक्त राज्य अमेरिका 338,157
18 blog.gvsig.org 566,578 - मेक्सिको 30,385
21 को 30 को सूची
21 डिजिटल-geography.com 716,191 संयुक्त राज्य अमेरिका 548,219
22 xyht.com 726,264 संयुक्त राज्य अमेरिका 374,066
23 geoconnexion.com 873,577 - दक्षिण अफ्रीका 23,294
24 geoinformatics.com 882,085 - भारत 398,567
25 giscafe.com 891,499 संयुक्त राज्य अमेरिका
26 cartography.cl 1,067,006 चिली 15,715
27 gis- प्रोफेशनल.com 1,291,383 - भारत 629,685
30 informedinfrastructure.com 1,700,212 - -
31 को स्थितिमा 40 को सूची
32 fernandoquadro.com.br 1,789,039 ब्राजिल 74,014
40 पत्रिकामैपिंग.कॉम 4,569,208 - -
अन्तमा, १ interesting स्पेनिश भाषाका साइटहरूको उपस्थिति उद्धार गर्न महत्त्वपूर्ण छ (त्यहाँ केवल were मात्र थिए) उच्च चाखलाग्दो स्थितिको साथ मापन गर्न। यद्यपि स्पेनिश भाषी क्षेत्र यी १ than भन्दा धेरै फराकिलो छ, जस्तो कि प्रभावकारी नोसोलोसि सूची.
यो सहि छ कि साइटहरु को छेद को प्रवेश को चयन गर्न को लागि कि तिनीहरू years बर्ष पहिले पहिलो सूचीमा थिए, यो सजिलो भएको छैन; विशेष गरी किनभने सुरुको मार्जिन अ English्ग्रेजी बोल्ने पत्रिकाहरूको पक्षमा थियो; जुन अब धेरै परिवर्तन भएको छ। केही समय पछि हामी एक नयाँ अपडेट गर्नेछौं, कि हिस्पैनिक मिडियाका चाखलाग्दो प्रतिनिधिहरू यस अदालतमा रहेका छन्: यो उदाहरणको रूपमा, अनंत भूगोल जुन वेबको भन्दा माथिको पहुँचको साथ5को आसपास रहेको छ जुन हामीमध्ये धेरै चाहना छौँ; यदि यो निष्पक्ष हुनुपर्ने थियो भने, भूग्राफिनिफिनिटि 8 स्थितिमा हुनुपर्दछ; प्रकाशन पछि हामीले हामीलाई रिपोर्ट गरेको छ Interesporlageomatica.com त्यो शीर्षमा देखा पर्नेछ, स्थिति position 37 मा २,2,590,195 XNUMX ०, १ XNUMX .XNUMX को एक PR संग। त्यसोभए, काट्नु पर्ने हुनाले हामीले ग्राफ र टेबल त्यहाँ छोडेका छौं; यदि तपाईंलाई लाग्छ कि कुनै अन्य साइट यस सूचीमा हुनुपर्छ वा कम्तिमा अर्को समीक्षाको लागि लक्षित हो भने, कृपया edit@geofumadas.com लाई सूचित गर्नुहोस्।
हामी सम्भव छ जस्तै Geospatial Twitter बाट Top40, जहाँ हिस्पैनिक र अङ्ग्रेजी भाषा बोल्ने क्रम को लागी आकर्षित गर्न आवश्यक थियो।
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो पल आइपुग्यो: # जीईओएसपीटियलब्याडफल्ट; एम्स्टर्डममा GWF 2019 मा सामेल हुनुहोस्
अर्को पोस्ट GRAPHISOFT ह्यू रॉबर्ट्स को कार्यकारी निर्देशक को रूप मा नियुक्त गर्दछअर्को »